Ntsay Christian : Tsy PM-n’ny marimaritra iraisana -
AccueilSongandinaNtsay Christian : Tsy PM-n’ny marimaritra iraisana
05/01/2019 admintriatra Songandina 0
Manoloana ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao, nanambara ny avy amin’ny KMMR sy ny Leagl Team, izay mpomba sy miaraka amin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, fa tsy natao ho an’ny firenena sy ho an’ny vahoaka ny praiminisitra ankehitriny, Ntsay Christian.
“Teny amin’ ny Kianjan’ny 13 Mai no nahafahana nanendry sy nametraka ny praiminisitra Ntsay Christian. Izany hoe, tamin’ny alalan’ny tolona, ka nametrahana ny marimaritra iraisana. Tamin’izany no nilazana fa praiminisitry ny marimaritra iraisana ingahy Ntsay Christian, saingy ankehitriny, mibaribary fa miandany amin’ny kandidà Andry Rajoelina ny tenany sy ny mpikamban’ny governemanta sasantsasany. Ny praiminisitra mihitsy no mampanjaka ny hosoka sy ny hala-bato mialoha sy nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa. Izy rahateo no fototry ny fanodikodinana safidim-bahoaka…”, hoy ny avy amin’ny KMMR tamin’ny alalan’ny depiote Felix Randriamandimbisoa.
Notsindrian’ireo avy amin’ny KMMR sy ny Legal Team ihany koa fa tsy mijery tombontsoam-bahoaka sy tombontsoam-pirenena ny praiminisitra Ntsay Christian fa manao izay mampandany ny kandidà tohanany, izay tsy iza fa ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, amin’ny maha avy amin’ny Mapar ny tenany. “Nampiasainy ny fahefana eo am-pelatanany ho amin’ny tombontsoan’olom-bitsy fa tsy ho an’ny firenena sy ny vahoaka akory”, hoy hatrany ny depiote Félix Randriamandimbisoa.
Nohamafisin’ny depiote Voahangy Raharimanarivo avy amin’ny KMMR fa efa mihoatra ny tokony ho izy ny fampiasan’ny praiminisitra Ntsay Christian ny fahefany. Noho izany, hoy izy, hiady hatramin’ny farany amin’ny tsy rariny izy ireo sy ny vahoaka miaraka aminy.
Toraka izany koa ny nanambarany fa mampiasa ny hery famoretana hoentina hampihorohoroana sy hanaovana herisetra ny vahoaka sy ireo izay mitaky ny marina ary mamoaka ny vaovao marina rehetra ny praiminisitra. “Hoentin’ny tahotra amin’ny hamoahana ny marina dia manao izao rehetra izao amin’ireo olona sy vahoaka miaraka mitaky ny mangarahara ny PM sy ireo manodidina azy”, hoy hatrany izy.
Tombin-tsolika etsy Alarobia : Hafindran’ny fanjakana any amin’ny lalam-pirenena faha 7
Loza mitatao ho an’ny sarambam-be bahoaka manarena Antananarivo ny fisian’ny tombin-tsolika eto antanan-dehibe, satria raha ny fanazavana azo avy amin’ny manam-pahaizana raha sanatria misy ny firehetana dia 10 kilometatra manodidina dia ho tratry izany avokoa. ...Tohiny